७२ दिनमा नयाँ मन्त्री ! विदेशीका ज्वाइँ ! एमसीसीका कट्टर समर्थक, ठाडै गरे ५० करोड घोटला ! - Updatekhabar.com Updatekhabar.com
७२ दिनमा नयाँ मन्त्री ! विदेशीका ज्वाइँ ! एमसीसीका कट्टर समर्थक, ठाडै गरे ५० करोड घोटला !
काठमाडौं । भुकम्प पीडीतको त्रिपालमा ५० करोड घोटलामा मुछिएका सांसद नारायण खड्का परराष्ट्र मन्त्री बन्नुभएको छ । खड्का चििर्चत भुकम्प पीडितको त्रिपाल कान्डमा त मुछिनुभएकै छ सँगसँगै उहाँ एमसीसीको कट्टर समर्थकदेखि विदेशीका ज्वाइँसम्म हुनुहुन्छ ।
सर्वोच्व अदालतको परमादेशबाट सरकार बनेको ७२ दिन पछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बल्लतल्ल एक जना व्यक्तिलाई परराष्ट्रमन्त्री बनाए । आफ्नै पार्टीभित्र सहमती नहुँदा नुहँदै बनाइएका परारष्ट मन्त्रीको विगत भने निक्कै विवादित छ ।
नेपालमा २०७२ सालमा भुकम्प जाँदा खड्का तत्कालिन सुशिल कोइराला नेतृत्वको सरकारमा शहरी विकास मन्त्री थिए । भुकम्प पीडीतका लागि ल्याएको त्रिपालमा त्यो बेला ५० करोड भन्दा माथीको घोटला भएको थियो । उक्त घोटाला काण्डमा तत्कालिन शहरी विकास मन्त्रीको प्रत्यक्ष/परोक्ष हात रहेको आरोप छ । तत्कालिन शहरी विकास सचिव अर्जुन कार्की र विवादास्पद व्यापारी दीपक मल्होत्राको साँठगाँठमा त्यतिखेर भुकम्प पीडीतको त्रिपालमा ठूलो अनियमितता भएको थियो । त्यस बखत मन्त्री खड्काको चर्को आलोचनासमेत भएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले उनलाई पदबाटै बर्खास्त गर्नसमेत खोजेका थिए तर पछि सेटिङमा केस सामसुम पारिएको थियो ।
त्यस बेला विराटनगरबाट काठमाडौंका लागि त्रिपाल लगायतका राहत सामग्री बोकेर आएको भनिएको ना ४ ख ९७६४ नम्बरको ट्रकमा अन्य सामान राखेर त्रिशूलीमा योजनाबद्ध रुपमा खसालिएको बताइन्छ । ‘जेठ ९ गते सो ट्रक लादिएको त्रिपाल बोकेको ट्रक खसालेर ठूलै हल्ला पिटाइयो र भनियो त्रिपाल सबै त्रिशुलीमा बग्यो ।’ यो सबै सेटिङ विवादास्पद व्यापारी दीपक मल्होत्राले मिलाएका थिए ।
उक्त त्रिपाल त्रिशूलीमा बेपत्ता भएको भनेर कागजात बनाएर भ्रष्टाचार गरेको र त्यसको सबै सेटिङ मल्लोहोत्राले मिलाएका थिए । ट्रक दुर्घटनामा परेर त्रिपाल लगायतका राहत सामग्री समेत हराएको भनेर जेठ ९ गते शनिबार समाचार दिइएको थियो ।
सो ट्रकमा पराल बोकाइएर ल्याइएको आशंका गरिएको थियो। त्रिशुलीमा पराल बगाएर त्रिपाल बगायो भनी कागज मिलाएर करोडौँ झ्वाम पार्ने घोटलामा मुछिएका व्यक्ति यीनै डा खड्का हुन् ।
तत्कालिन अवस्थामा भूकम्पबाट घरबारविहीन भएका १४ जिल्लाका पीडितलाई चार लाख ६२ हजार सात सय दुई पाल खरिद गर्ने क्रममा करिब ५० करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले गरेको छानबिनले पुष्टि गरेको थियो ।
डा नारायाण खड्का एमसीसीका पनि कट्टर समर्थक हुन् । नेपाली काग्रेसमा प्रधानमन्त्री देउवा , नेता रामशरण महत र खड्का एमसीसीका सबैभन्दा कट्टर समर्थक हुन् । परराष्ट्र मन्त्रालय एमसीसीसँग पनि प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने मन्त्रालय हो ।
त्यसो त डा नारायण खड्का विदेशीका ज्वाँइसमेत हुन् । खड्काले विदेशी महिलासँग विवाह गरेका छन् । उनकी श्रीमती क्यानडीयन हुन् । उनको अहिले पनि ग्रिन कार्ड रहेको बताइन्छ ।
यस अघि स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीमा हस्पीटलमा चेन विजनेस चलाएका विवादास्पद व्यक्तिलाई देउवाले नियक्ती गरेका थिए । यस पटक पनि त्यस्तै विवादास्पद व्यक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्रालयको चाबी बुझाइएको छ ।